Saturday 26th September 2020 13:34:03 in Wararkii Maanta by Madaxa Wararka
Dhismaha Madaarka Caalamiga Ah Ee Berbera Oo Ku Dhow Dhammaad & Xaaladihii Ugu Dambeeyay.
Berbera(Karin News)- Dhismaha madaarka caalamiga ah ee Berbera ee Somaliland oo ah madaarka labaad ee dalka oo socday in muddo ah ayaa waqtigan ku dhow dhammaad, iyada oo hab casri ah loo dhisay.
Madaarka ayaa loo dhisay hab cusub oo casri ah, kaas oo waafaqsan nidaamka dulimaadyadda hawada ee qaaradda, sida uu sheegay Diritan Gajonbalaj oo ah Agaasimaha guud ee Madaarka.
Agaasimaha oo warbixin siiyey warbaahin caalami ah oo kala duwan ayaa sheegay in ay si dhab ah u maalgeliyeen madaarka , isla markaana loo qalabeeyey , iyada oo la hubinaayo in uu la jaan qaadaayo madaarku nidaamyadda caalamiga ah ee madaaradda dunnida, waxaanu Agaasimuhu intaas ku daray in uu gabogabo ku dhawyahay, isla markaana laga shaqayn doono waxyaalaha lagama maarmaanka ah, ka hor inta aanay baadhitaan ku samayn nidaamkooda dhisme maamulka Hawada ee Somaliland.
Sidoo kale, waxa uu sheegay Agaasime Diritan Gajonbalaj in ay waajib ku tahay dhismaha madaar adag oo laysku halayn karo, isaga oo intaas ku daray in maamul ahaan iyo nidaam ahaan la aamini karo, wuxuuna tilmaamay in ay baadhitaan ku samayn doonaan koox baadheyaal ah oo caalami ah, isla markaana madaxbanaan, kuwaas oo eegi doona in nidamkooda dhisme uu waafaqsan yahay xeerarka amaanka hawada ee ee caamaiga ah loona yaqaano (Chicago Convention).
Warbixintan oo lagu daabacay shabakada Construction review , isla markaana ay wakaaladda wararka Somaliland ee SOLNA ka soo xigatay warkan ayaa lagu sheegay in dawladda Somaliland ay doonayso in magaaladda Berbera ay noqoto xarun ganacsi, isla markaana ay u baahan tahay in la dhiso madaarka oo noqon doona mid gudaha iyo dibaddaba u shaqeeya, isla markaana ay isticmaalaan maalgashadeyaasha gudaha iyo dibadduba, iyada oo ay ka soo degi doonaan dalxiiseyaasha caalamiga ahi.
Furitaanka madaarka ayaa lagu sheegay warkan in uu kor u qaadi doono sumcadda Somaliland, iyada oo sidoo kalena la wado waddada isku xidhi doonta xuduudka Itoobiya iyo magaaladda Berbera ee Somaliland.